အင်ျဂလိပျစကားပွောကွှယျစဖေို့ အီဒီယမျတှေ လလေ့ာကွစို့။
အင်ျဂလိပျစာကို လလေ့ာကွတဲ့အခါ Vocabulary လေးတှကေ ကကျြမှတျလလေ့ာရလှယျကူသလောကျ အီဒီယမျတှကေတြော့ လလေ့ာရ၊ မှတျသားရခကျခဲပါတယျ။ အခုမှတျ၊ ခဏနမေေ့ ဖွဈတတျကွပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ အီဒီယမျတှကေို စကားပွောရငျ ထညျ့သှငျးပွောဆိုနိုငျဖို့က ထငျသလောကျမလှယျကူပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အီဒီယမျတှကေို လလေ့ာတဲ့အခါ အခုဖတျပွီး ပွီးရောဆိုပွီး မလလေ့ာဘဲ တဈခေါကျဖတျ ပွီးရငျ စာကွောငျး ၃၊ ၄ ကွောငျးမှာ အီဒီယမျလေးတှကေို ထညျ့သှငျးပွောကွညျ့၊ ဒီလိုနညျးနဲ့ မှတျသားဖို့ တိုကျတှနျးပါရစေ။ ဒါဆို ဒီနအေ့တှကျ မှတျရလှယျပွီး အသုံးမြားတဲ့ အီဒီယမျလေးတှကေို တူတူမှတျသားကွညျ့ရအောငျနျော။
1. I’m over the moon.
ဒီအီဒီယမျလေးတှရေဲ့ အဓိပ်ပာယျက “အလှနျအကြူး ဝမျးသာပီတိဖွဈပွီး ပြျောရှငျပါတယျ” ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အရငျက ပွောနကေဖြွဈတဲ့ “ I’m very happy.” ဆိုတဲ့စကားကို ဘေးခဏခြိတျထားလိုကျတော့နျော။
2. Catch up today.
Catch up ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျကတော့ “တှရေ့အောငျ” ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျပါ။ “Let’s meet today” အစား “ Let’s catch up today.” လို့ပွောရငျတော့ ပိုပွီးလှပတဲ့ ဝါကတြဈကွောငျးဖွဈမှာပါ။
3. I’m swamped.
“ငါအရမျးအလုပျမြားနတေယျ” ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျလေးပါ။ “I’m very busy” နဲ့ အဓိပ်ပာယျတူတဲ့ အီဒီယမျလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
လကျဖကျရညျတဈခှကျ လို့တော့ မထငျလိုကျပါနဲ့။ ဒီ အီဒီယမျလေးကို ဘယျနရောမှာ အသုံးပွုလဲဆိုတော့ တဈစုံတဈခုကို ကိုယျက စိတျမဝငျစားမနှဈသကျကွောငျးပွောလိုတဲ့အခါ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ဥပမာ- I’m not interested in swimming.
Swimming is not my cup of tea. အဓိပ်ပာယျကတူတူပါပဲ။
5. Hit the book
တိုကျရိုကျဘာသာပွနျရငျတော့ စာအုပျကို ရိုကျခတျခွငျးပေါ့။ ဒါပမေဲ့ အီဒီယမျအနနေဲ့ အသုံးပွုရငျတော့ သူ့ရဲ့အဓိပ်ပာယျက လုံးဝပွောငျးလဲသှားပါတယျ။
ဉပမာ- I need to hit the book.
ဆိုရငျ ငါစာအုပျတှကေို ရိုကျဖို့လိုတယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျမဟုတျတော့ပါဘူး။ ငါစာကကျြဖို့လိုတယျ ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျဖွဈသှားပါတယျ။
6. It makes me under the cloud.
Under the cloud ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျလေးက Sad နဲ့တူပါတယျ။ ဒီအဖွဈအပကျြက ငါ့ကိုဝမျးနညျးစတေယျ လို့ သုံးလိုတဲ့အခါ It makes me sad အစား It makes me under the cloud ဆိုပွီး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
7. Chicken and egg situation.
ဒါလေးကတော့ ရှငျးပါတယျ။ ဘယျဟာက ပထမအကွောငျးတရားလဲ သခြောမသိနိုငျတဲ့အခါ အသုံးပွုတဲ့ အီဒီယမျလေးပါ။
ဥပမာ - I need to have experience to get job, but without job, I can’t have any experience. It’s chicken and egg situation.
ဒီ အီဒီယမျလေးတှကေ တကယျ့ကို အသုံးမြားပွီး အသုံးလညျးဝငျတဲ့ အီဒီယမျလေးတှဖွေဈပါတယျ။ နောကျနတှေ့မှောလညျး စာဖတျသူတို့ရဲ့ အင်ျဂလိပျစာစှမျးရညျကို တိုးတကျလာစမေယျ့ ဆောငျးပါးလေးတှကေို ဖနျတီးပေးနိုငျအောငျ ကွိုးစားနပေါတယျ။ အားလုံးပဲ ကောငျးသောနရေ့ကျလေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။
အင်္ဂလိပ်စကားပြောကြွယ်စေဖို့ အီဒီယမ်တွေ လေ့လာကြစို့။
အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာကြတဲ့အခါ Vocabulary လေးတွေက ကျက်မှတ်လေ့လာရလွယ်ကူသလောက် အီဒီယမ်တွေကျတော့ လေ့လာရ၊ မှတ်သားရခက်ခဲပါတယ်။ အခုမှတ်၊ ခဏနေမေ့ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အီဒီယမ်တွေကို စကားပြောရင် ထည့်သွင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့က ထင်သလောက်မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါကြောင့် အီဒီယမ်တွေကို လေ့လာတဲ့အခါ အခုဖတ်ပြီး ပြီးရောဆိုပြီး မလေ့လာဘဲ တစ်ခေါက်ဖတ် ပြီးရင် စာကြောင်း ၃၊ ၄ ကြောင်းမှာ အီဒီယမ်လေးတွေကို ထည့်သွင်းပြောကြည့်၊ ဒီလိုနည်းနဲ့ မှတ်သားဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ ဒါဆို ဒီနေ့အတွက် မှတ်ရလွယ်ပြီး အသုံးများတဲ့ အီဒီယမ်လေးတွေကို တူတူမှတ်သားကြည့်ရအောင်နော်။
ဒီအီဒီယမ်လေးတွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က “အလွန်အကျူး ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီး ပျော်ရွှင်ပါတယ်” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က ပြောနေကျဖြစ်တဲ့ “ I’m very happy.” ဆိုတဲ့စကားကို ဘေးခဏချိတ်ထားလိုက်တော့နော်။
Catch up ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ “တွေ့ရအောင်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။ “Let’s meet today” အစား “ Let’s catch up today.” လို့ပြောရင်တော့ ပိုပြီးလှပတဲ့ ဝါကျတစ်ကြောင်းဖြစ်မှာပါ။
“ငါအရမ်းအလုပ်များနေတယ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေးပါ။ “I’m very busy” နဲ့ အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့ အီဒီယမ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ဒီ အီဒီယမ်လေးကို ဘယ်နေရာမှာ အသုံးပြုလဲဆိုတော့ တစ်စုံတစ်ခုကို ကိုယ်က စိတ်မဝင်စားမနှစ်သက်ကြောင်းပြောလိုတဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Swimming is not my cup of tea. အဓိပ္ပာယ်ကတူတူပါပဲ။
တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်တော့ စာအုပ်ကို ရိုက်ခတ်ခြင်းပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အီဒီယမ်အနေနဲ့ အသုံးပြုရင်တော့ သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က လုံးဝပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
ဆိုရင် ငါစာအုပ်တွေကို ရိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ငါစာကျက်ဖို့လိုတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပါတယ်။
Under the cloud ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေးက Sad နဲ့တူပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်က ငါ့ကိုဝမ်းနည်းစေတယ် လို့ သုံးလိုတဲ့အခါ It makes me sad အစား It makes me under the cloud ဆိုပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဘယ်ဟာက ပထမအကြောင်းတရားလဲ သေချာမသိနိုင်တဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့ အီဒီယမ်လေးပါ။
ဒီ အီဒီယမ်လေးတွေက တကယ့်ကို အသုံးများပြီး အသုံးလည်းဝင်တဲ့ အီဒီယမ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း စာဖတ်သူတို့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကို တိုးတက်လာစေမယ့် ဆောင်းပါးလေးတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကောင်းသောနေ့ရက်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။အင်ျဂလိပျစကားပွောကွှယျစဖေို့ အီဒီယမျတှေ လလေ့ာကွစို့။